Chikafu chinokodza: ​​Ziva Zvinokuvadza Kudya Kwako!
Geographical bug: Chii icho? Inotepfenyurwa sei? Unorapwa here?
utano	 11 December 2016
Immunity: Ungawedzera sei? Ndezvipi zvakanakisa zvekudya?
Zvakakosha kwazvo kuti muviri wemunhu unogara uine hutachiona hwepamusoro, sezvo uri iwo unotidzivirira kubva kuzvirwere, uye kana hutachiona hwakadzikira tinokwanisa kutapukirwa nemavhairasi, senge furuwenza, kana zvimwewo zvirwere zvakakomba. . Uyezve, nehutachiona hwakadzika tinonzwa takaneta zvakanyanya, tisingadi kana kutokanganisa mafungiro edu. Asi zvinokwanisika kudzoreredza hutachiona kuburikidza nechikafu, iwe unoziva? Kusarudza chikafu chaicho kunogona kubatsira kunatsiridza hutachiona hwako uye kudzivirira chero chirwere kubva kukukuvadza, sezvo chikafu chiine mavitamini, zvicherwa uye zvimwe zvinhu zvinoverengeka izvo muviri unoda kushanda zvirinani. Kana iwe uchiziva kuti ndezvipi zvakanakisa zvekudya zvekusimudzira hutachiona, haufanire kutendeukira kune zvinowedzera kuti uvandudze hutano hwako.
Ko hutachiona hunodzikira nguvai?
Kudzivirirwa, ndiko kuti, kuzvidzivirira kwemuviri wedu kunoenderana nezvinhu zvinoverengeka zvekugara zvichikwirira uye zvichitidzivirira kubva kuzvirwere, asi kune dzimwe nguva dzegore padzinodzikira uye chero dzihwa kana kutonhora kunotirwisa. Uye vanhu vazhinji vanopomera nguva yechando pamusoro pazvo, vachiti kushanduka kwemamiriro ekunze kunoita kuti tinzwe kushatirwa uye tinokwanisa kurwara, asi izvo hazvisi nekuda kwekuchinja kwemamiriro ekunze, asi nekuda kwenzvimbo dzatinogara. Nechando uye kutonhora kwemamiriro ekunze kuri kuuya, zvakajairika kuti nzvimbo dzakavharwa dziwedzere kuwanda nevanhu vanoda kuvanda kubva kuchando, saka vanhu vazhinji vanotenderera munzvimbo imwechete yakavharwa inoita nzvimbo yakakwana yekutapurira hutachiona uye hutachiona ne nharaunda. Nekudaro, immune system inoda kushanda zvakanyanya kudzivirira iyo nhengo uye inopedzisira iine hutachiona hwakadzika uye pane imwe nguva inogona kubata chimwe chirwere.
Saka panguva ino zvakakosha kubhadhara zvakanyanya kune chikafu, ndipo patinodya chikafu chinogona kubatsira kuwedzera hutachiona, kurara zvakanaka usiku, kurovedza muviri uye zvakare kuyedza kudzora kushushikana kwezuva nezuva.
Zvepamusoro zvekudya zvinowedzera hutachiona
Kudya kwedu ndechimwe chezvinhu zvakakosha kuchengetedza hutachiona hwakanaka mumuviri, sezvo zviri kuburikidza nezvikafu zvatinodya kuti tinowana mavitamini, zvicherwa uye zvinhu zvakawanda zvatinoda kuti muviri ushande zvakanaka. Chikafu chakakosha chinobatsira kusimudzira hutachiona hwemuviri michero mitsva, miriwo, uye zvisina kugadzirwa chikafu, asi muzviitiko zvakawanda hatiwane huwandu hwazvo. Tarisa uone pazasi pazasi nezvikafu zvikuru zvekusimudzira hutachiona:
Garlic: Garlic inogona kushandiswa mumhando dzakasiyana dzechikafu, sezvo iri imwe yezvinonhuwira zvine mutsindo zviripo, pamusoro pezvo, ine zvinhu zvinoita kuti allicin ishandiswe, inova inorwisa kurwisa hutachiona nemabhakitiriya. Vanhu vanodya yakawanda gariki kashoma kuti vatore dzihwa.
Muto wehuku: zvirokwazvo pawakabatwa nechikosoro, kana mumwe munhu waunoziva, iwe wakanzi uve nemuto wehuku, sechirevo chekuti chinobatsira kupora kubva kuzvikosoro nefuruu, uye zvakare zvinowedzera hutachiona, ichokwadi chose.inoburitsa amino asidhi cysteine, inoitirwa kurwisa mabhakitiriya nekusimbisa immune system.
MaYoguriti: Iwo anorarama lactobacilli aripo mu yogati mabhakitiriya ane hutano ayo miviri yedu inoda kushanda zvirinani, anochengeta ura husina hutachiona hunokonzera zvirwere.
Tea: Tea zvinwiwa zvine antioxidant mabasa zvinokurudzira kuwedzera hutachiona uye zvakare kubvisa kusagadzikana.
Zvibereko zveCitrus: Maorenji, mandimu uye zvimwe zvibereko zvine vhitamini C yakawanda zvinobatsira kuwedzera hutachiona, kunyanya pakurapa dzihwa nefuruwenza. Asi paunonyanya kudya michero iyi usati warwara, immune system yako ichave iri nani. Mimwe michero yakafuma muvhitamini C imango, chinanazi, sitirobheri, papaya, kiwi, guava, acerola uye blackcurrant.
Nyama: Zinc yakakosha mukusimudzira hutachiona, uye inogona kudyiwa kuburikidza nemombe uye nyama yemombe. Nekushandisa Zinc, zvinokwanisika kudzivirira hutachiona hwakati wandei, sezvo iri basa rekuvandudza kwemasero machena emuviri.
Chinyorwa ichi chakakubatsira here? Tiudze pano mune zvakataurwa!
Zvikafu zvine fiber
Chromium Picolinate, nzwisisa kuti inoshanda sei
Kudya kwevakaroora, maitiro ekusarudza akanakisa